Ra’iisul Wasaare Khayre,”Munsaabadda Ciidu Waxay Midaynaysaa Shacabka Soomaaliyeed” – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Khayre,”Munsaabadda Ciidu Waxay Midaynaysaa Shacabka Soomaaliyeed”
Juunyo 25, 2017 9:01 b 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan shucuubta kale ee Muslimiinta adduunka ugu hambalyeeyey munaasibadda Islaamiga ah ee Ciidul Fidri. Mudane Xasan ayaa farriintan hambalyada ah ugu rajeeyey dadka Soomaaliyeed iney nabad ku ciidaan, kuna gaaraan ciidan ciideeda horumar, nabad, barwaaqo iyo midnimo.
“Waxaan halkaan hambalyo ku aaddan CiiddaFidriga uga soo jeedinayaa shacabka Soomalaiyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhammaan Muslimiinta adduunka. Waxaan dadka Soomaaliyeed ku leeyahay ku ciida nabad iyo farxad. Waxaan Illaah ka baryayaa in aynu ciiddan ciideeda ku gaarno, nabad iyo horumar.ayuu yiri R.Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Ciidan ay ku soo beegmeyso xilli horumar laga sameeyey amniga dalka gaar ahaan magaalada Caasimadda, Isla-markaana dadaalada geedi-socodka dawlad-dhisidda iyo nabad-dhisidda Soomaaliya ay marayaan meeshii ugu wanaagsanayd, iyadoo sannadba sannadka ka danbeeya uu dalku ka soo hagaagayo oo aan marna dib loo noqon doonin..
In Ka Badan 120 Ruux Oo Ku Dhimatay Qarax Ka Dhacay Wadanka Pakistaan